﻿Download Asụsụ Obere NdụmọdụIhuenyo Microsoft Office from Official Microsoft Download Center
Enyemaka ịsụ asụsụ abụọ na ịsụ ọtụtụ asụsụ
Ndị njinia enyemaka nwere ike ịgbatịkwu nkwado maka asụsụ ha anaghị aghọta
Ojii asụsụ PC ekere eke
Asụsụ na Ọwụwanyanwụ Esia na asụsụ n'Ederede Siri ike nwere ike ịchọrọ nwunye faịlị nkwado. Nke a ka emela na Ebe Njikwa na 'Nhọrọ Mpaghara na Asụsụ'.
Pịgide akara Office File, họta Nhọrọ họta Asụsụ ma tọọ Asụsụ Ọbere ndụmọdụ iji Makọọ Asụsụ Ngosipụta.'
Iji wepụ nbudata a:
Site na Nchịkọta họrọ mmalite gaa na Ebe Njikwa.
Pigide ugboro abụọ Tinye/Wepụ ndụmọdụ.
Na ndepụta ndụmọdụ ndị ewunyere nsonso, họta Ọbere ndụmọdụ Asụsụ nke Microsoft Office, ma pịgide Wepụ maọbụ Tinye/Wepụ. Ọ bụrụ na ngosiama apụta, soro ihe asịrị gị mee iji wepụ ndụmọdụ.
Pịgide E-eh maọbụỌdịmma iji gosi na ị chọrọ ịwepụ ndụmọdụ ahụ.